आजको राशिफल २०७८ साल श्रावण १० गते आइतबारGandaki Press
आजको राशिफल २०७८ साल श्रावण १० गते आइतबार
साउन १०, २०७८ ०५:०१ मा प्रकाशित
वि.सं. २०७८ साल श्रावण १० गते आइतबार, तदनुसार ई.सं. २०२१ जुलाई २५ तारिख, राक्षसनाम संवत्सर, श्रीसूर्यदक्षिणायन, वर्षाऋतु, चान्द्रमान अनुसार श्रावणकृष्णपक्षको प्रतिपदा तिथि विहान ६ः२८ बजेसम्म, त्यसपछि द्वितीया रहनेछ ।
मेष : काम गरेर देखाउने समय रहेको छ । रोकिएका अपूरा कार्यलाई पहल गर्दा पूर्ण गर्न सकिनेछ । मित्र मिलन हुनेछ । विशिष्ट व्यक्तिसँग सहकार्य गर्न पाउँदा हर्षित भइनेछ । ऐतिहासिक कार्यको आरम्भ हुनेछ ।
वृष : आर्थिक पक्ष बलियो रहला । छरछिमेकमा नयाँ चहलपहल रहनेछ । सकारात्मक सोचको विकास हुनेछ । भाग्यले साथ दिँदा थालेका अधिकांश कार्यले पूर्णता पाउने छन् । मांगलिक कार्यको निम्तो पाइनेछ ।
मिथुन : नयाँ लगानिले तनाब मात्र थपिनेछ । सहयोगीहरुले साथ छाड्न सक्छन्, सजक रहनु होला । सोचे अनुरुप कार्य बन्ने छैन । कडा परिश्रम पछि मात्र लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ । दैनिकीमा नै व्यस्थ रहनुहोला ।
कर्कट : मान्यजनको सहयोग उचित रुपमा मिल्नेछ । प्रेमीप्रेमीका बिचको सम्बन्ध प्रगाढ रहनेछ । मनोरञ्जनात्मक समारोहमा सहभागी भइनेछ । आकर्षण शक्ति बढेर जानेछ । पतिपत्नी विचको सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ ।
सिंह : व्यवसायमा नयाँ लगानि गर्दा पछिसम्म लाभ लिन पाइनेछ । शत्रू पक्ष कमजोर रहँदा कार्य गर्ने वातावरण बन्नेछ । आर्थिक पक्ष सबल रहनेछ । पूराना उठ्न बाँकी रकमलाई पहल गर्दा उठाउन सकिनेछ ।
कन्या : मानसिक क्षमतामा बृद्धि विकास हुनेछ । रमाइलो यात्राको संभावना प्रवल देखिन्छ । पढाइलेखाइमा मन जानेछ । सन्तानको सहयोगले महत्वपूर्ण कार्य बन्नेछ । तर स्वास्थ्यको भने ख्याल राख्नुहोला ।
तुला : स्वास्थ्य अवस्था कमजोर नै रहनेछ । श्रमको सही मूल्यांकन नमिल्दा कार्य गर्न मन लाग्ने छैन । नजिकका व्यक्तिसँग नै विवाद बढ्नेछ । गोपनीयता बाहिरीँदा समस्या सृजना हुन सक्छ, सजक रहनु होला ।
बृश्चिक : आफ्नै प्रयासले कार्य बन्दा हौसला बढ्नेछ । अध्ययनमा रुचि बढ्नेछ । हर्षको खबर सुन्न पाइनेछ । साथीसंगीसँगको रमाइलो पल वित्नेछ । कृषि एवं पशुपालमा लाग्नेहरुका लागि लाभकारी समय रहेको छ ।
धनु : दिगो फाइदा हुने खाले कार्यको आरम्भ हुनेछ । विपक्षीहरु पनि मेलमिलापमा आउन बाध्य हुने छन् । खुसी बढ्नेछ । सानो कार्यमा भुल्ने समय छैन । पूर्व तयारीका साथ कार्यमा लाग्दा विशेष सफलता मिल्नेछ ।
मकर : बोलिको कदर हुनेछ । थालेका कार्यबाट छोटो समयमा नै लाभ लिन सकिनेछ । लामो समय पछि मित्र मिलन हुनेछ । मानसम्मान मिल्नेछ भने सामाजिक कार्यबाट जस समेत पाइनेछ । आकस्मिक लाभ मिल्नेछ ।
कुम्भ : शारीरिक आलस्यताले गर्दा कार्य गर्न मन लाग्ने छैन । अनावश्यक चिन्ताले सताउनेछ । हतारमा लिएको निर्णयले समस्यामा पार्नेछ । सोचे अनुरुप कार्य नबन्दा दिक्क लाग्नेछ । दैनिक कार्यमा नै व्यस्थ रहनु होला ।
मीन : मिहिनेतको उचित कदर हुनेछ । सामाजिक पद प्रतिष्ठा मिल्नेछ । नाम, दाम मिल्ने समय रहेको छ । सही समयको उचित लाभ लिनुहोला । आय मूलक कार्यमा ध्यान जानेछ । व्यवसायमा नयाँ संझौता हुनेछ ।